ချင်းပြည်နယ် ပညာရေးသမိုင်းတွင် အစောဆုံးဘွဲ့ရသူနှစ်ဦးအား ဂုဏ်ပြုသော ပုံတူကြေးရုပ်တုကိုြ? - Yangon Media Group
ချင်းပြည်နယ် ပညာရေးသမိုင်းတွင် အစောဆုံးဘွဲ့ရသူနှစ်ဦးအား ဂုဏ်ပြုသော ပုံတူကြေးရုပ်တုကိုြ?
ဖလမ်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ – ချင်း ပြည်နယ်ပညာရေးသမိုင်းတွင် အ စောဆုံးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သော ဦးရှလွယ် (ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး- ငြိမ်း)နှင့် ဒေါ်လှောန်ကိပ်တလွဲ (အထက်တန်းပြဆရာမ-ငြိမ်း)တို့ အား ဂုဏ်ပြုသော ပုံတူကြေးရုပ် တုများဖွင့်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၉ရက် နံနက် ၉နာရီက ဖလမ်းမြို့ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်းမုခ်ဦးရှေ့၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ် က ကြေးရုပ်တုများအား စက်ခလုပ် နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ပြည်သူများထံမှ လက်မှတ်များကောက်ခံ
ယခုနှစ် မန်းသင်္ကြန် သံချပ်ပြိုင်ပွဲတွင် ”ရွှေလက်ညှိုး” သံချပ်အဖွဲ့ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မည်
ဟာဇက်ရော ရီးရဲလ်ပါ အကျိုးရှိမည့် အပြောင်းအရွှေ့ဟု မာတီနက်ဇ် သုံးသပ်